बैंकिङ खबर । रिलायन्स फाइनान्स नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको connectIPS e-Payment प्रणालीमा आवद्ध भएको छ । सोमबारबाट कारोबार शुरु गर्ने गरि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले रिलायन्स फाईनान्स उक्त प्रणालीमा आवद्ध गराएको हो । रिलायन्स फाईनान्सका ग्राहकहरुले पनि अब अयललभअतक्ष्एक् भ(एबथmभलत प्रणालीको तथा मोबाईल एप्सबाट आफ्नो खाता मार्फत अनलाईन कारोबार गर्न सक्नेछन् । क्लियरिङ्ग हाउस उक्त
बैंकिङ खबर। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेशनल बैंकिग ईन्स्टिच्यूट (एनबीआई) वीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र एनबीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जीव सुब्बाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा एनबीआईले बनाएको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी मोबाईल एपको संरचना र
बैंकिंग खबर । बजारको पछिल्लो अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएका लगानीकर्ताहरुद्वारा विभिन्न चरण र स्वरुपमा आन्दोलन भई रहेका छन् । यहि क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रांगणमा आइतबार अकस्मात भएको तालाबन्दी तथा तत् पश्चात अर्थ मन्त्रालय, बोर्डको संचालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरु र बोर्डका कर्मचारीहरुलाई गरिएकोे दुव्र्यवहार एवं मानमर्दन प्रति नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले गम्भिर खेद प्रकट गरेको छ
बैंकिङ खबर। नेपाल लाइफ इनस्योरेन्सले विभिन्न घातक रोगहरू (क्रिटिकल इल्नेस) को जोखिम बहन गर्ने बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्सले ५० लाख रुपैयाँ सम्मको जोखीम वहन हुने ‘घातक रोग सुविधा योजना’ नामक बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । समयको माग र सेवाग्राहीहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उक्त बीमा योजना सार्वजनिक गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
बैंकिंग खबर । धितोपत्र बोर्डले मुद्रा तथा पुंजीबजारमा देखिएका समस्या व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारद्वारा गठित सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित बोर्डसंग सबन्धित २८ बुंदाहरुलाई दुइ हिस्सामा अगाडी बढाएको छ । पहिलो कार्य योजना अनुरुप तत्काल गरिनु पर्ने १२ बुंदाहरु सम्पन्न भई सकेका छन् । साथै चैत्र मसान्त तथा आ.वा. २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि हुँदा बजारमा तरलता पठाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन् । क, ख र ग बर्गका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) वापत ४ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले सिआरआर
बैंकिङ खबर । सिटिजन्स बैंकको सिईओमा गणेशराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत गणेशराज पोखरेललाई चैत्र १८ गते बाट लागु हुने गरि आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीको
कामना सेवा विकास बैंक शाखा विस्तारमा तिव्रता दिँदै
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंकले बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वडा नं ७ स्थित निजगढमा आफ्नो ७४औं शाखा कार्यालय स्थापना गरि कारोबार संचालन गरेको छ । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुक्त रुपमा गरे । कार्यक्रममा बोल्दै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले प्रदेश नं २
बजार निराशाजनक छैन, बचत गर्ने पैसा लगानी गर्नुस्
बैंकिंग खबर । अहिलेको बजार अवस्थालाई हेर्ने हो भने तटस्थ मान्न सकिन्छ । बजार धेरै नकारात्मक पनि छैन र सकारात्मक पनि छैन । हालको बजार विशेष गरि दुइवटा मूल सिधान्त लिएर लगानीकर्ताहरु चलेका देखिन्छन् । पहिलो अझै कम्पनीहरुको मूल्य घटाएर त्यसपछि खरिद गर्ने, दोश्रो बजार लगभग न्युनतम विन्दुमा आएकोले अब आफुसंग रहेको बचतले शेयर खरिद
मुक्तिनाथ विकास बैंकको एकैसाथ दुई नयाँ शाखा विस्तार
बैंकिङ खबर । मुक्तिनाथ विकास बैंकले दाङ जिल्लाको घोराही र बर्दिया जिल्लाको गुलरीयामा दुई नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । घोराही शाखाको समुद्घाटन घोराही उप–महानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले गरे । कार्यक्रममा बोल्द, चौधरीले मुक्तिनाथ विकास बैकले आफ्नो उत्कृष्ट सेवालाई कायम राख्दै आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा थप योगदान
शेयर बजार ३.८७ अंकले बढ्यो, बचत लगानी गर्ने उपयुक्त समय
बैंकिङ खबर । सोमबार शेयर बजार ३.८७ अंकले बढेर १,१३८.६७ अंकमा कायम भएको छ । हाइड्रोपावर, फाइनान्स, उत्पादनमुलक र अन्य बाहेक सबै उपसुचक बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समुह ५०. अंकले बढेको छ । बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण नलिई वा आफ्नै बचतबाट शेयरमा लागनी गरेका लगानीकर्ताहरुको लागि अहिलेको बजार उपयुक्त देखिन्छ ।
३४ अर्ब तरलता हुँदा समेत केही बैंक सिसिडी समस्यामा, अन्तर बैंक ब्याजदर बढ्यो
बैंकिङ खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फेरी कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो)मा दबाब देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढन नसकेको र कर्जाको माग उच्च भएपछि केही साना बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सिसिडीमा दबाब देखिएपछि बैंकहरु अन्तर बैंक सापटीबाट सिसिडी व्यवस्थापन गर्न लागेका छन् । जसले गर्दा अन्तर बैंक सापटीमा
हकप्रद जारी गर्न अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्ड पुग्यो वोमी लघुवित्त
बैंकिङ खबर । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेको छ । लघुवित्तले एक बराबर एकको अनुपातमा १० लाख १० हजार ८ सय ८० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको हो । हकप्रद निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापीटल रहेको छ । लघुवित्तको गत फागुन
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकले प्रदेश नम्बर ३ धादिङ्ग जिल्लाको धादिङ्गवेसीमा नयाँ शाखा कार्यलय संचालनमा ल्याएको छ । बैंकको सो नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । सोही अवसरमा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले नेपाल बैक लिमिटेड हाल
मेरो माइक्रोफाइनान्सले गर्यो चौतारा निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग
बैंकिङ खबर । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुबित्त बित्तीय संस्था गाउँ शहर लमजुङले डाँडाकठेरीमा चौतारा निर्माणको लागि १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । सो रकम संस्थाका शाखा प्रबन्धक देवकी कडेलले मेरो मनकामना महिला केन्द्रका केन्द्र प्रमुख कृष्णमाया अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । सो रकम चौतारा निर्माण गर्नका लागि महिला केन्द्र मार्फत सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो